Dhamaanteen Xiiso Leh: Qiimaha cajiibka ah ee nafaqada Heem • Dawooyinka Inc.eu
Waxaan danaynaynaa dhamaanteen: Qiimaha Nafaqada ee aadka u Yaabka leh ee Hemp
Waxa aan cunno iyo sida loo helo ayaa si isdaba joog ah ugu ciyaaraya damiirkeenna. Sababo caafimaad iyo kuwo deegaan awgood, inbadan oo naga mid ah waxay jecelyihiin inay helaan bedel nafaqo leh oo waarta oo ku saabsan cunnadeena. Waxaa jira hal warshad oo awood u leh inay daboosho baahiyaha nafaqada iyo jiritaanka labadaba: hemp.
1 Nafaqada cagaarshow
1.2 Dufanka caafimaadka leh
1.3 Fiitamiinada iyo macdanta
1.4 Nafaqooyinka kale ee waxtar leh
2 Ku dar hemp cuntadaada
2.1 Saliid cagaarshow
2.2 Caano Hemp
Hemp waa la takooray muddo tobanaan sano ah sababtoo ah xiriirkiisa aan la gariirin ee marijuana. Badanaa waxaa lagu duubay inaadeerkeed cilmi nafsiga, qiimaha hemp ee nafaqada iyo nafaqada ayaa badanaa la iska indhatiraa. Qeybta ugu nafaqada badan geedka waa abuurka - oo kaligiis la cuni karo ama loo isticmaali karo in laga sameeyo caano iyo saliid. Saliida abuurka hemp waa inaan lagu qaldin CBDsaliid, saliida urursan ee geedka.
Cunnooyinka aan hilibka lahayn iyo kuwa vegan-ka ayaa badanaa lagu dhalleeceeyaa inay yihiin kuwa aan siinin dhammaan nafaqooyinka muhiimka ah. Tani waxay badanaa loola jeedaa la'aanta sahayda borotiinka, maadaama jirka bini'aadamka lagu yaqaan inuu si fiican uga soo nuugo borotiinka hilibka borotiinka khudradda. Si kastaba ha noqotee, tani waxay sabab u tahay 'phytates' laga helo dhirta, taas oo faragalin karta qaadashada borotiinka.
Hemp sidoo kale wuxuu ka kooban yahay dhammaan 10 amino acids muhiim ah (protein). Tani waa dhif iyo naadir ilaha cuntada dhirta maqnaanshaha phytates-ka waxay ka dhigan tahay in jirku si wax ku ool ah u nuugo borotiinadan.
Dufanka caafimaadka leh
In kasta oo kalluunka loo tixgeliyo ilaha ugu waxtarka badan ee omega-3 asiidh dufan leh, hemp sidoo kale waxaa ku jira asiidh dufan badan oo muhiim ah. Marka loo barbardhigo kalluunka, omega-3 ka soo nuugista hemp aad ayuu u hooseeyaa. Si kastaba ha noqotee, waa il weyn oo laga helo asiidh dufan kale oo isu beddelaya kiimikooyin bayoolojiyeed oo muhiim ah. Tani waxay ka dhigeysaa isha ugu wanaagsan ee nafaqooyinkan kuwa aan cunin kalluunka.
Fiitamiinada iyo macdanta
Hemp ma aha oo kaliya isha ugu wanaagsan ee asiidhyada dufanka leh iyo borotiinka, waxay sidoo kale ku jirtaa qiyaas caafimaad leh oo fiitamiinno iyo macdano ah. Geedku waxa ku badan fiitamiin E, oo ka caawiya ilaalinta maqaarka iyo timaha caafimaadka qaba, iyo birta oo muhiim u ah dhiigga caafimaadka qaba.
Nafaqooyinka kale ee waxtar leh
Warshadda waxaa ku jira iskudhisyo loo yaqaan phytosterols kuwaas oo waxtar u leh hoos u dhigista heerarka kolestaroolka. Intaa waxaa dheer, abuurka hemp waa isha weyn ee magnesium - nafaqo muhiim ah oo door ka ciyaara in ka badan 300 falcelinta enzymatic ee jirka.
Ku dar hemp cuntadaada
Abuurka hemp waxaa loo cuni karaa kaligood, iyadoo qayb ka ah saladh, rootida lagu dubay, ama lagu cadaadin karo saliiddooda. Waxaad ka iibsan kartaa qaabab kala duwan oo geedka ah dukaamada caafimaadka iyo dabcan qadka.
Saliidda hemp waa mid ka mid ah waxyaabaha sida caadiga ah loo isticmaalo cuntada laga sameeyo geedka. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo saladhka iyo in lagu sameeyo suugada, iyo waxyaabo kale. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaadan u isticmaalin saliida hemp shiil maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelan kartaa asiidhka dufanka leh waxayna u badashaa dufanka buuxa. (Tani badanaa waxay dhacdaa oo keliya marka heerkulku ka sarreeyo 200 ° C).
Waxaa laga sameeyay saliida hemp, biyo iyo macaaneeyaha, caanaha hemp waa ikhtiyaar caan ah oo aan lahayn caano. Ma aha oo kaliya inuu ka caafimaad badan yahay caanaha caanaha waayo waxay ku jiraan dufan yar, oo waliba ah isha ugu weyn ee nafaqada kaladuwan.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), Is-jabinta (EN), CaafimaadkaEN)
caafimaad lehcaafimaadkaxagashacuntosaliida cannabis
Dad badan oo Mareykan ah ayaa isticmaalaya xashiishka, laakiin isticmaalida hooyooyinka lama aqbalo
Aad iyo aad u tiro badan oo Mareykan ah ayaa aqbalaya isticmaalka xashiishadda caafimaadka maxaa yeelay gobollo badan oo Mareykanka ka mid ah ...
Jaamacadda Kanada waxay baaraysaa sida cannabis uga caawin karto la-dagaallanka kansarka eeyaha
Sababtoo ah dareenkooda ur ee xoogan, eeyaha ayaa mararka qaarkood dhakhaatiirtu u adeegsadaan inay ku ogaadaan cudurada. Tusaale ahaan…